Spiritum Ongororo - Pamhepo kuverenga kwepfungwa
Kuverenga zvinyorwa zvepfungwa > Spiritum Review
Apo mweya unokufambisa iwe kutsvaka kutungamirirwa mukugamuchira nzira yako yezvokwadi, mavheche evanhu vane hanya Spiritum vakagadzirira kukutungamirirai. Iyi nhepfenyuro yepfungwa dzepasi rose yakanyatsotora nzvimbo yayo senzira yekukubatsira iwe kuungana (mumutauro wako wemutauro) kune dzimwe nyika dzinoremekedzwa mupfungwa.
Iwe unogona kutaura SpiritumMugumo wakafanogadzwa. Iyo mubereki kambani, Eso.tv, inogadzira psychic TV mapurogiramu anotepfenyurwa munyika gumi nemana uye anotariswa nechido nemazana ezviuru zvevaoni. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kutarisira iwo epamusoro matanho echokwadi, kurongeka uye kunzwisisa kubva pakuverenga kwako.
Unoda uchapupu here? Tarisa maitiro avo emapfungwa. Spiritum handpicks uye unonyatsocherechedza mafungiro evanhu vakanaka kubva kune imwe nyika yekune imwe nyika kupa hutungamiri hwepamusoro-soro uye mazano, zvakagadzirirwa munhu oga oga.
Imwe nyanzvi yepfungwa yakanyatsogadzirisa maitiro akare akadai sekadhi yekuverenga tarot, nhamba yepamusoro uye nyeredzi uye / kana ane ruzivo rwemagadzirirwo emhando uye mano. Uye mumwe nomumwe anoongororwa nguva dzose kubatsira kubatsira kuti vashandise zvipo zvinotarisirwa zvizvarwa zvinotarisirwa kutungamira vanotsvaka muupenyu hwavo nzira. Pamwe chete, zvinomiririra hutano hwemhando dzakasiyana siyana, kusanganisira kutungamirirwa kwemweya, kuverenga magetsi, kurongedza kurota, rune kuverenga, kuisa, uye nezvimwe zvakawanda.
Uye zviri nyore kuti ubatane! Nzvimbo iyi yakagadzirirwa kunyengedza asi kwete kukudzvanyirira nemapikicha anokurumidza uye ari nyore anokugonesa kusarudza mhuka dzepfungwa, kutaura pasina muhurukuro yemavhidhiyo, kana kutenga zvitukuro zvekuverenga uri woga. Kana ukasarudza hurukuro yakasununguka kusarudza, unogona kupfuurira nekukurumidza kuvhara bhadhiyo yebhokisi, iyo inoramba ichiratidza vhidhiyo yepfungwa dzakasarudzwa. Kana iwe unogona kuvhara pane imwe yenhoroondo iyo inoratidza yakakurumbira ibhuro re "Free Chat Now".
Ipapo iwe unogona kusangana nemapfungwa iwe wakasarudza nekubvunza chero mubvunzo unopisa mupfungwa dzako. Wakambosangana nemudzimai wehupenyu waunoda kuti uve newe here kana iwe uchifanira kumupa iyeyo-ho? Unoita basa rakabudirira uye kubudirira kunokumirira chaipo pakona kona here? Mumwe munhu anodikanwa kwauri zvechokwadi panzvimbo yakanaka here? Ko kurota kwakajeka kwawakanga uine usiku huno kunoreva kushamisika kwawakagara wakamirira kuri munzira yayo here?
Spiritum mafungiro evanhu vanoita mazano nekutungamirirwa kwauri uye hupenyu hwaunofungidzira. Nokuongorora maitiro ezvepfungwa, unogona kunyatsoziva kuti ndezvipi zvakakosha iwe uye unoita sarudzo yakanyatsozivikanwa. Kune zvakawanda zvokukubatsira iwe pamwe chete; Nhoroondo dzakadzika uye dzakaratidzwa, unyanzvi, unyanzvi, kuverenga mitauro, mitauro yakataurwa, mitengo, zvipupuriro, kunyange bhiyoti pfupi. Kuwedzera sebhonasi yakawedzerwa, unogona kuona kuti vangani vakange vakagadzirira vakabatsirwa nemapfungwa iwe uri kufunga uye unoona maitiro avo ano.
Sezvimwe nzvimbo itsva, Spiritum ichiri mukukura kwayo mode. Semuenzaniso, hapasina kuisa zvidzidzo uye zvishoma izvo zviri kunze kuno; chinonyanya kujeka pamapfungwa. Zvinotora kufamba zvishoma kuti uwane FAQ chikamu, icho chakavanzwa pasi pe "Help" pane pasi peji. Tinonyanya kufunga kuti zvimwe zvinhu uye kufamba nyore nyore kuchawedzerwa sezvo sangano rinoramba richiwedzera.
Kunyange zvakadaro, pane zvinhu zvakawanda zvakawanda izvo Spiritum irikuita nemazvo. Kana iwe uri mutsva kune ino saiti, iwe unogona kutaura neiyo psychic iyo inoratidzirwa se "parizvino inowanikwa Yemahara Chat" kwemaminitsi gumi kusvika mahara. Iyo yemahara yekutaura inoitirwa kuve inokurudzira uye iri; hapana mari inodiwa kuti utore mukana weMweyaum masevhisi.
Spiritum rakapararira nemitambo yekutanga ... uye ndiani angavapa mhosva? Zvinongoramba zviri nani pane "kusununguka." Kana wangozvigutsikana kuti unyanzvi hwako hwepfungwa hunonzwisisa zvaunoda uye mamiriro ako ezvinhu, unogona kutenga zvikwereti, Unokwanisa zvakare kupinda mumagariro ega-mavhidhiyo mavhidhiyo kana kuungana nemeseji kana foni …kuda kwako. Mumwe nomumwe wepfungwa anoisa mutengo wake pachake, kutanga pa 99 ¢ neminiti uye asingateereri paunyanzvi mano. Zviri kwauri kuti uone urefu hwekuverenga kwako; nenzira iyo iwe uchaziva kusvika-mberi izvo zvaunenge uchiverenga zvichabhadhara pasina chero kushamisika.
Sezvaungatarisira kubva kune imwe kambani yeEos.tv, Spiritum anozvipira kugutsa kugutsikana. Kana iwe usina kufara zvachose nekuverenga kwako, uchawana rumwe ruverengero rusununguko kubva kune chero upi zvake hwepfungwa munharaunda yavo.
Chinokosha: Spiritum inomiririra kukosha kwakanakisisa. Zvichida hapana imwe nyanzvi yezvepfungwa inoshanda nhasi inopa rubatsiro rwemamiriyoni akawanda kubva kune avo vakanyanyisa pfungwa dzepfungwa munyika dzakawanda. Paunowedzera muhurukuro isina nengozi yekutaurirana chat, hapana chakakosha kuti uone kubuda kwezvipo zvepfungwa dzechipo. Uye zvichida, mune remangwana rose rinopenya kuti riwane.